ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်ရေး၊ သန့်ရှင်းသောအစိုးရ..... ဖြစ်ပေါ်ရန် ပိုင်ဆိုင်မှုတင်ပြခြင်းအဆို ကန့်ကွက်ခံရခြင်း၏ နောက်ကွယ်တွင်. - ~ ဆုံနေကြ
ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်ရေး၊ သန့်ရှင်းသောအစိုးရ..... ဖြစ်ပေါ်ရန် ပိုင်ဆိုင်မှုတင်ပြခြင်းအဆို ကန့်ကွက်ခံရခြင်း၏ နောက်ကွယ်တွင်. -
Wednesday, August 15, 2012 လပြည့်ဝန်း No comments
အင်္ဂါနေ့၊ ဩဂုတ်လ ၁၄၊ ၂၀၁၂
ဒါပေမယ့် NLD ဦးဝင်းမြင့် ရည်ညွှန်းသွားတဲ့ အခြားဥပဒေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ၂၀၁၀ အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက် ရက်စွဲနဲ့ ပြဌာန်းခဲ့တဲ့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ဥပဒေပုဒ်မ(၁၀၁)မှာ တော့လွှတ်တော်၏အတည်ပြုချက်ဖြင့်
နိုင်ငံတော်သမ္မတက ခန့်အပ်သောပုဂ္ဂိုလ်များသည် တစ်စီးပွားတည်းဖြစ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို တန်ဖိုးနှင့်တကွ စာရင်းပြုစုပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတထံ ပေးပို့ရမည်။
အဲဒီတော့အတိုချုပ်လိုက်ရင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကဆိုတာတနည်းအားဖြင့် ရွှေးကောက်
တင်မြှောက်ခံထားရတဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဌဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဌဆိုတာလည်း ရွေးကောက်ခံ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဆိုသူတွေဟာ သက်ဆိုင်ရာပါတီဝင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်..။ သမ္မတ/ဒုသမ္မတ လို ဘယ်ပါတီဝင်အဖြစ်ကမှ အလိုလျောက်အနားယူထားသူတွေမဟုတ်ပါဘူး။